​कसैको प्रेम प्रस्ताव स्वीकारेकी छैन– प्रकृति, गायिका
Tuesday, 26 Jun, 2018 1:00 PM
गायिका प्रकृति थलङ हिजोआज देश–विदेशको कार्यक्रममा व्यस्त छिन् । ‘पुर्वाञ्चल सिंगिङ स्टार–२०७१’ उपाधि जितेसँगै गायन करिअर सुरु गरेकी प्रकृतिले त्यसपछि ‘प्रकृति’ नामक एल्बम निकालिन् । उनका ‘उड्दैछ यो मन’, ‘गुराँश फूल्ने’, ‘गै¥ही गाउँ’जस्ता गीत हिट छन् । ५० को हाराहारी गीतमा स्वर दिइसकेकी प्रकृति मोडलिङ पनि गछ्र्रिन् । प्रकृति भन्छिन्, ‘मलाई गायनमा भन्दा मोडलिङ र अभिनयमा बढी अफर आउँछ । तर, मलाई अभिनयमा रुचि छैन ।’ यिनै प्रकृतिसँग एमपी सुब्बाको जम्काभेट :
‘विश्वकप’ कतिको हेर्दैै हुनुहुन्छ ?
आम्मै हेर्छु नि । सुरुमा त जर्मनीको सर्पोटर थिएँ । तर, अहिले ब्राजिलको पक्षमा छु ।
ब्राजिलकै पक्ष किन नि ?
सानैमा पनि मलाई ब्राजिल मनपथ्र्यो । तैपनि यसपटक जर्मनीको सर्पोटर भएकी थिएँ । तर, राम्रो खेलेन । ब्राजिल एकदमै राम्रो खेल्छ । ब्राजिलले यसपटकको विश्वकप जित्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
‘विश्वकप’ले गायनलाई असर पारेको छ कि छैन ?
असर पारेको छ नि । सबैको ‘विश्वकप’ ध्यान विश्वकपमै छ । स्टुडियोमा गयो, त्यहाँ पनि विश्वकपकै कुरा मात्र चल्छ । राति अबेरसम्म विश्वकप नै हे¥यो । निन्द्रा पुग्दैन । यो विश्वकप कहिले सकिन्छजस्तो हुनथाल्यो ।
तपाइँको हिजोआज सांगीतिक गतिविधि के छ ?
त्यही हो, कार्यक्रम र रेकर्डिङ । भर्खरै कुवेत गएर आएको हुँ । अहिले चाहिँ तिजको एउटा गीत तयार गर्नेक्रममा छु ।
तपाइँ त ‘सिंगिङ स्टार’ पनि हो है ?
हो नि । २०७१ साला ‘पुर्वाञ्चल सिंगिङ स्टार’ जितेकी हुँ । त्यसपछि नै मैले गायन सुरु गरेकी हुँ ।
तपाइँ कस्ता गीत बढी गाउनुहुन्छ ?
रोमान्टिक नै बढी गाउँछु । मलाई सेन्टिमेन्टल मन पदैन । पुर्वेली लोकगीत र आफ्ना कल्चरल गीतहरु पनि गाउँदै आएकी छु ।
मोडलिङ पनि गर्नुहुन्छ । रुचि मोडलिङमा पनि हो ?
होइन । आफ्नो मन परेको गीतमा मेमोरीका लागि मोडलिङ गर्छु । तर, अरुको गीतमा गर्दिनँ ।
राम्री हुनुहुन्छ । अफर त आउला नि ?
कति आउँछ–आउँछ । साध्य छैन । फिल्ममा लागि समेत अफरहरु आउँछ । तर, मलाई अभिनयमा रुचि नै छैन । त्यसैले ‘नो’ भन्छु ।
फिल्ममा जस्तै प्रेम प्रस्तावको ओइरो होला नि ?
यो उमेर नै प्रेम प्रस्ताव आउने बेला हो, आउँछ । तर, अहिलेको समयलाई मैले पूरै संगीतलाई दिएको छु । त्यसैले त्यस्ता प्रेम प्रस्ताव आउँदै गर्छ, सुन्दै जान्छु । अहिलेसम्म कसैको प्रेम स्वीकारेकी छैन ।
स्कुल पढ्दा प्रेमको अनुभव त लिनुभएको होला ?
छैन । म धरानमा बस्थे । मैले धरानबाट संगीत सिक्न थालेकी हुँ । तीन वर्ष धरानमा संगीत सिकेपछि संघर्ष गर्न काठमाडौं आएकी हुँ । त्यसैले मेरो मन प्रेम गर्नुतिर नै गएन ।
घरघज बसाउँने सोचचाहिँ कहिलेसम्ममा छ ?
हेरौँ, दुई÷तीन वर्षपछि होला । पहिलो कुुरा त लगन जुर्नु प¥यो नि । विवाह जस्तो कुरा सोचेर मात्र हुन्न । भाग्यमा जुरेको हुनुपर्छ ।